ရွှေတွံတေးဆရာတော် ထိုင်းနိုင်ငံမဟာချိုင်မှ စစ်တွေမြို့ ဦးဥတ္တမနေ့ပွဲသို့တက်ရောက် | MoeMaKa Burmese News & Media
စက်တင်ဘာ ၁၂၊ ၂၁၀၂
၉. ၉. ၂၀၁၂ နေ့တွင်ကျင်းပသော ရခိုင်အာဇာနည် ဆရာတော်ဦးဥတ္တမနေ့ကို စစ်တွေမြို့တွင်လည်းကျင်းပရာ ထိုင်းနိုင်ငံ မဟာချိုင်မှ ရွှေတွံ တေးဆရာတော်တက်ရောက်ခဲ့သည်။
စစ်တွေမြို့ပန်းခြံတွင် ဆရာတော်ဦးဥတ္တမအား လာရောက်ဂါရ၀ပြုကြသော ရခိုင်တိုင်းရင်းသားပရိသတ်ကို ရွှေတွံတေးဆရာတော်က အမှာ စကားပြောကြားခဲ့သည်။
အမျိုးသားရေးအစ ဦးဥတ္တမက … ၀ံသာနုအစ ဦးဥတ္တမက …. ဆိုရင်ဘယ်သူငြင်းမလဲ။ ရခိုင်အာဇာနည် ဦးဥတ္တမက စံပြအဖြစ်လုပ်ပြခဲ့ပြီ။ ရဟန်းသံဃတွေဟာ ပြည်သူတွေနဲ့ တသားတည်းအမြဲရှိနေတယ်။ ပြည်သူလူထုတွေဒုက္ခ ရောက်ရင် ကိုလိုနီကျွန်ဖြစ်တုန်းကလည်း ဆရာတော်ဦးဥတ္တမအဦးအစ စံပြလုပ်ခဲ့တယ်။ ဒီလိုပါဘဲ ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ် ဘုန်းကြီးတို့ရဟန်း သံဃာတွေဟာ ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တိုင်း အမြဲရှေ့တန်းမှာရှိနေမယ်လို့ ကတိပြု အသိပေးချင်ပါတယ်။ အချင်းချင်းညီညွတ်ကြပါ။ ကူညီစောင့်ရှောက်ကြပါ။ အသားထဲက လောက် မထွက်ကြပါနဲ့။ သစ္စာမဖောက်ကြပါနဲ့။ ကဲ … ပရိသတ်တွေအားလုံး ဆန္ဒပြုကြပါစို့ဟုမိန့်ကြားရင်း ငြိမ်းချမ်းပါစေ ရခိုင်မြေ …. လို့ (၃) ကြိမ်ကြွေးကြော်လိုက်ကြပါသည်။
2 Responses to ရွှေတွံတေးဆရာတော် ထိုင်းနိုင်ငံမဟာချိုင်မှ စစ်တွေမြို့ ဦးဥတ္တမနေ့ပွဲသို့တက်ရောက်
မောင်မောင် on September 14, 2012 at 11:52 am
ကောင်းလိုက်တဲ့အမှာစကား။ခုလိုအမှန်တရားတွေပြောကြားပေးတဲ့ဆရာတော်ကို တပည့်တော် ကြည်ညိုလို့မဆုံးပါဘုရား။ဆရာတော်ဦးဥတ္တမဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံတင်မက အာရှနေ၀န်းအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရသော အာဇာနည် ဆရာတော်တစ်ပါးပါ။ယနေ့ထိ ဆရာတော်ဦးဥတ္တမလို ဘာသာစကားကိုးမျိုးတတ်သော သူရဲကောင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် မပေါ်သေးပါ။
သာကီသွေး on September 17, 2012 at 5:35 pm
မွေဖွားရာအရပ်မှ ဖြစ်ရတယ့့့် ။
တို့တိုင်း တို့ပြည် တို့မြန်မာပြည်